Ọ bụrụ na ịchọrọ "Parkour" egwuregwu a na-akpọ Smashing Run bụ nke gị | Gam akporosis
na agwụ agwụ-agba ọsọ laghachi gị gam akporo mobile na Smashing Rush, egwuregwu na-anwale ihe ndị ọzọ, ọ bụ ezie na n'ikpeazụ ọ na-anọgide ọzọ nke ndị na-agba ọsọ na-enweghị ngwụcha nke anyị na ha ga-eji oge na-agwụ ike na ndụ anyị. Agbanyeghị na ekwesịrị ikwu na ihu ọma ya na enyere aka pụrụ iche site n'ịgbalị ịbụ obere "Parkour".
Ihe kachasị mma banyere Smashing Rush bụ akụkụ ọrụ aka ya nke anyị nwere ike na-etu ọnụ maka akparamagwa agwa ha onye obula. Nke a na - enye ya ihe pụtara ìhè iji gosi ọdịiche dị na ya na ndị ọgba ọsọ ndị ọzọ adịghị agwụ agwụ achọtara na Playlọ Ahịa Google.
1 Obere obere ihe ngosi Parkour
2 Abụọ bọtịnụ, otu na-awụlikwa elu na onye na ọsọ
3 Dị iche iche egwuregwu ụdịdị na Smashing Rush
Obere obere ihe ngosi Parkour
Maraworị, ị ga-ahụ na vidiyo YouTube, ndị ahụ jumps dị ize ndụ nke ị na-esi n'ụlọ na-ewu ụlọ ma ọ bụ ọkpọkọ ndị ahụ ha na-arapara n’ahụ iji gosipụta na ịgagharị ọsịsọ, anyị anaghị achọ ihe karịrị ahụ anyị ma dịrị n’ụdị mma mara mma. Nke a bụ ihe enyere Smashing Rush, egwuregwu egwuregwu na ụfọdụ isi ihe.
Ihe na-enweghị njedebe ndị na-agba ọsọ na-abịa karịa site n'echiche ahụ, site na akwụsịla ịgafe n’otu akụkụ gaa n’akụkụ nke ọzọ, ọ bụ ezie na ebe a echiche bụ inwe fun jumping si otu ebe gaa ebe ọzọ rue dị iche iche na ọkwa na ịrụ ndị kasị sie ike nkà.
N'echiche a Smashing Rush bụ egwuregwu na maara otú e si akpọ ya kaadị na-enye anyị sekit na-enweghi usoro. Ihe ọ pụtara bụ na oge ọ bụla ị na-egwu egwuregwu ị ga-ahụ onwe gị na gburugburu ebe dị iche iche nwere nsogbu dị iche iche.
Abụọ bọtịnụ, otu na-awụlikwa elu na onye na ọsọ
Na Smashing Rush, ha achọghị ime ka ihe sie ike, na ị ga-enwe bọtịnụ gbagoro, ịpị ya ọzọ ga-eme okpukpu abụọ, na ihe bụ lunge ma ọ bụ pounce button. Nke a ga - enyere anyị aka ịdaba n'ọtụtụ nsogbu, yabụ anyị kwesịrị ịkpachara anya iji ya.
Ihe ndi ozo anyi gha eme bu ihe ndi anyi gha eme. Nke ahụ bụ, akara na-egbuke egbuke ga-apụta na-egosi nke ahụ a ga-awụli elu na-enweghị anyị ime ihe ọ bụla. Igodo ịwụ elu ga-eme ka anyị si na mmanya na-amị amị wee banye n'elu ikpo okwu na nke ọzọ, yabụ mmegharị anyị nwere ike ịme ga-ejedebe n'oge ụfọdụ ịwụli n'oge kwesịrị ekwesị.
Anyị nwere ike ịsị na mgbe ụfọdụ ị ga-agabiga ka ị bụrụ naanị onye njem na njem gị site na Smashing Rush, ihe na-enye obere izu ike na egwuregwu ahụ ma gbaa gị ume ịnọgide na-egwu ya. N'oge ndị ahụ ị ghọrọ onye nkiri, ị ga - amalite ịchọpụta ihe ngosi dị mma nke ndị edemede ahụ. Site n'ụzọ, ị ga-enwe ihe odide 21 ka ị kpọghee ya na omume ọma na mmegharị ha, yabụ m na-egwuri egwu nwa oge.
Dị iche iche egwuregwu ụdịdị na Smashing Rush
Na Smashing Rush anyị nwekwara ọtụtụ egwuregwu ụdịdị yabụ na anyị nwere ihe ọzọ anyị ga-eme. Ihe ịma aka mode na-etinye gị n’ihu aghụghọ nke ị ga-eji ihe ị mụtara iji merie ha. Ọnọdụ a ga-enye anyị ohere igwu egwu nke anyị ga-eji kpakpando atọ mezue ha; dị nnọọ ka Super Mario Run.
Omume ya ọzọ bụ iche iche nke ngwa na anyị nwere ike itinye aka na mkpụrụ edemede 21 anyị nwere ike imeghe. Nke a na-enye ya ezigbo ihe iji gbaa anyị ume ka anyị gaa n'ihu na-egwuri egwu ma si otú a jiri ejiji dị iche iche mara agwa anyị. Ọ bụ ihe nkịtị na ụdị egwuregwu na na Smashing Rush ọ ghọrọ ihe dị mkpa.
Na mmezu nke teknụzụ, etinyere Smashing Rush ezigbo ebe ihe niile kwuru mgbe a bịara n’ihe eserese gị, animations na ụda. Ọ bụ egwuregwu enwere ike ịnụ ụtọ n'echiche ahụ, ebe ọ bụ na anyị ga-enwe ezigbo akwụkwọ nke ngwa maka ihe odide anyị, onye ọ bụla n'ime ha ga-enwe mmemme nke ha iji nwee ọ toụ na ọtụtụ puku jumps.
Smashing Rush bụ ezigbo egwuregwu na egwuregwu na-adịghị agwụ agwụ nke na-adaba na Playlọ Ahịa Google n'efu. Ikekwe ụdị ihe a emebiela, mana dịka ha na-ekwu, ọ gaghị egbu oge ma ọ bụrụ na obi ụtọ dị mma.
Ezigbo arụmọrụ arụmọrụ
Dị iche iche nke ngwa na ụdịdị
Ọ bụ onye na-enweghị njedebe na-agba ọsọ
Smashing Rush: Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Parkour
Developer: Soda Nri
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Smashing Rush, onye ọzọ na-adịghị agwụ agwụ na-agba ọsọ na mmetụ nke ụdị «Parkour»